Gemology glossary - Duramazwi rematombo anokosha
mune orthorhombic, monoclinic uye triclinic masystem pane matatu ekristaro matemo ehurefu hwakasiyana. Kufuratirwa kwakapetwa kuchaitika munzvimbo zhinji, asi pachave nemaviri maakisi (madhairekisheni ekubvisa kamwechete) ayo anosiyana pakatarisana mune yega yega gem marudzi. zvicherwa zvemasisitimu aya zvinozivikanwa se biaxial. (Mune orthorhombic system iwo maseru ekuona akaenzana ku 'c' (musimboti wediki axis), nepo mune monoclinic uye triclinic pasina hukama hwakananga nemakristani ekristaro.)
chiratidzo chekuratidzira kubva kune yakatarisana yakafanana fibrous inclusions kana (ziso rekati) mhango. Iyo imwechete streak yechiedza inoratidzika pamakona akakodzera kuenda kunongedzo yeiyo inclusions uye inonyatsoonekwa pasi peimwechete yepamusoro musoro sosi nematombo akachekwa en cabochon
(coloring mumiriri). Icho chikamu chema molekyuli icho chinokonzeresa kune remubatanidzwa ruvara. Iyo iripo senge chinhu chakakosha munzvimbo yemakemikari mumatombo ediochromatic kana sekusachena kwengozii mumatombo eallochromatic
maonero anoonekwa enzvimbo dzinogona kupatsanurwa mwenje chena (tsvuku, orenji, yero, girini, bhuruu, violet) pamwe nekunzwa kwepepuru iyo isingawanikwe mumutambo wezuva. Ruvara runotsanangurwa nehue, kuzadza uye toni. Muviri wemuvara wedombo unobva pachiedza icho chinoonekwa pamwe nekuve nekuda kwekutorwa kwehumwe hurefu hwechiedza chinoonekwa. Ruvara runogona kukonzerwa nekupararira, kupindirwa kwechiedza uye fluorescence
muti-senge kana moss-senge kutsemuka kuzadza (uko inclusions yezvakasiyana zvinhu zvinogona kusefa kuzorora - kazhinji iron oxide.)
kubvisa kubwinya kwegirazi uye transluceny. .
Kupararira ndiko kupatsanurwa (kupaza) kwechiedza chena mumavara echitarisiko nekubvongodza (kukotama kwechiedza) sezvo mwenje unopfuura nepakati pezvimiro zviviri zvakarerekera. Mumatombo anowanzo kunzi 'moto'
anisotropic - zvicherwa zvinoratidzira zvine chekuita nemaziso (semuenzaniso, mabwe mune tetragonal, hexagonal trigonal, orthorhombic, monoclinic uye triclinic masystem)
kuomarara isimba remaminerari rinofanira kuramba kukwenya (abrasion). Onawo chikero chaMoh
Hure rinoreva zita remuvara iwo wega: iyo yakachena spectral sensations dzvuku, orenji, yero, girini, bhuruu, violet uye misiyano yeiyi. Hue zvakare inotaura nezvekunzwa kwepepuru (pakati pvuku uye violet), iyo isingawanikwe mumutambo wezuva
zvinongoitika zvisirizvo-zvisina nucleated maparera emvura anoumba mune mollusk painodzoserwa kumvura mushure mekubviswa kwechirimwa chemaparera asina-nucleated akagadzirwa. Izvi hazvifanirwe kuvhiringidzwa neyegungwa mbeu pearis ayo anowanzo kuve mashoma kwazvo. Iyo yemvura yakachena `keshi 'inongodaidzwa nekuti ivo zvakare haina kukura kubva kunhengo yekugadzira. Dzimwe nguva zvinonzi 'zvisina mhodzi' maparera kuita mutsauko neisina-nucleated. Onawo Biwa maparera
maJapan anodaidza mbeu maparera `keshi '(poppies). Iko kusangana kuno kuri pakati pehukuru hudiki hwembeu dzepoppy uye madiki kwazvo akagadzirwa maparera
izwi rakajairika rekupa mwenje unoonekwa 'unotonhora' nechinhu kana uchinge wawana simba rakawandisa mune imwe nzira kana imwe. Iyo mishanu misimboti luminescent phenomena ndeiyi: chemi-luminescence (mhedzisiro yekuchinja kwemakemikari), tribo-luminescence (inogadzirwa nekukwesana), thermo-luminescence (inogadzirwa nekupisa), photo¬luminescence (inogadzirwa neanoonekwa kana asingaonekwe mhenyu emasimba epamusoro / mapfupi. wavelength) uye cathodoluminescence (zvinobva mukufemerwa pamwe nedanda reelectron mukamuri yekuzorora)
imwe metric carat = chikamu chimwe muzvishanu chegiramu (0.20gr) kana 200 milligrams (mg). A metric carat ndiyo chikamu chehuremu hwematombo anokosha uye maparera akagadzirwa. Kurema kwacho kunoratidzirwa kunzvimbo mbiri dzechiverengero uye madhimoni anowanzo sunungurwa achinzi 'mapoinzi', kureva, 1 metric carat = zana mapoinzi
pre-huripo inclusions: avo vaivapo pamberi penzvimbo yekristaro yakatanga kuumbika uye yakayamwa 'yakagadzirirwa kugadzirwa' mune yekupedzisira (semuenzaniso, solid particles uye madiki makristasi. Ivo vanowanzo kuve asina kujairika kutenderedzwa mukati mese uye kashoma kune hukama kune iyo inomiririra kristaro chimiro
pseudomorph (fomu renhema) imaminerari inotora chimiro (chimiro) cheimwe chicherwa (kana chinhu chinogadzirwa) nekuda kwekupisa uye / kana kumanikidza kana kuita kwemakemikari, semuenzaniso, ziso reingwe (kutsiva kwequartz kwecrocidolite, asbestos mineral); huni agate (a quartz kutsiva huni)
kuratidzwa ndiko kudzoka neenzvimbo (ingava internai kana yekunze) yeimwe chechiedza chinowira pamusoro pechiso ichocho. Onawo Mitemo yaSnell
Refraction iko kushanduka kwenzira iyo mwenje unofamba kana ichipfuura kubva pane imwe nhepfenyuro kuenda kune imwe yeanosiyana optical density (kunze kwekurova kwakajairika pamusoro pemaviri midhiya pa90 °). Sezvo mwenje unopfuura kubva kune wakajairika uchienda kune yakasviba svikiro (semuenzaniso, kubva kumhepo kuenda kudombo) rakakotamira kune zvakajairwa, zvakapesana sezvo richipfuura kubva kune denser kuenda kune risinganzwisisiki svikiro rakakombamira kure neyakajairwa. Optical density chinhu chakaomarara chinozviratidza mukudzikira kwechiedza. Onawo Mitemo yaSnell
izvo zvakaumbwa nekuvakwa kwezvinhu (sediments) izvo zvakatangira mukuparara kwemuviri nemakemikari ematombo akange aripo pasi pano.
iyo SG kana huremu hwehukama hwechinhu chiyero pakati pehuremu hwechinhu uye huremu hwakaenzana vhoriyamu yemvura yakachena pa4 ° C (huwandu hwesimba remvura) uye neyakajairika mhepo kumanikidza. SG inoenderana nemakemikari akaumbwa echinhu pamwe nekubatana kweat-atomiki (zvazviri, zvinokanganiswa kwete chete nehuremu hweatomu yezvinhu zvakasiyana-siyana zvemukati asiwo maitiro akaiswa maatomu pamwechete)
mune hexagonal, trigonal uye tetragonal sekristaro masisitimu pane imwechete optic axis (kutungamira kwekusapindirana kumwechete): zvicherwa zvemasisitimu aya zvinozivikanwa se uniaxial (mumatombo euniaxial iyo optic axis inoenderana nemusoro wakamira we 'c' axis)